SEENAA ABEEBEE TUFAA ARADDOO – Oromedia
Home » Seenaa » SEENAA ABEEBEE TUFAA ARADDOO
Biyyi Itiyoophiyaa jedhamtu kun fedhiimoo? dogoggoraan ijaaramtee?…….Gosti Oromoo warra Tuulamaa Ilmaan EEKAA (Yeekkaa) har’aa deebbii seenaa qabu.
Horri Finfinnee horiin yoo dhugan ni furdisa ture Kun hafeeti Xaayituu Buxul haati warraa Miniliik Miilli furdannaan qal’iseef…….Seenaan Abeebee Tufaa deebbii qaba…….
Tufaa Araddoo Gosa Oromoo Tuulamaa keessaa kan warra EEKAA ti.Bulchiinsi lafti isaan bulchaa turanis Tulluu Ererii asi hanga daangaa warra Manzee gara Ankoobarriitti achi. Garanaan Tufaa Munaa warra Salaalee fi warra Gullallee waliin akka wal daangeessanidha odeeffannoon ani argadhe.
Hora Finfinnee Oromoonni Ilmaan Tuulamaa horii obaafatan qabiyyee warra EEKAA jala akka turedha.Deemsa keessas Tufaa Araddoo hora Finfinnee kanarratti ajajaa turaniiru. Namoonni hora kana obaafatan horii dhibbatti horii tokko gibira Tufaa Araddoof kaffalaa turan.
Tufaa Araddoo diinni karaa warra Manzee seenee lafa diriiraa Finfirraa kaasee hanga Dabre Siinaatti jiru akka hin fudhanneef waraanaa turaniiru.Karaa warra Manzee kan jiran warra Ankoobarrii warra Miniilik faati.
Akka obbo Tadilaa Odaa Tufaa Araddoo natti himanitti Tufaa Araddoo loltoota hedduu qabu waan turaniif hedduu sodaatamu.Miniliik gaafa mana hidhaa Atse Tewoodiroos Gondorirraa badee dhufe Tufaa Araddoo akka isa dhoksuuf jaarsummaa ergatee kadhachaa akka turedha. Haaluma kanaanis gamnoomaan haa ta’u baqaan waliin isaa kan hin beekamne gaara Inxooxxorra qubachiifamaniiru.Yeroo sana lubbuu baafannaafidha.
Tufaa Munaa fi Tufaa Araddoo darbee darbee hora Finfinnee kanarratti wal lolaa akka turanidha.Basaastonni yeroo sana turan gidduu Tufaa Munaattii fi Tufaa Araddootti shaakkii uumaniiru qabu dhimma qubannaa Miniliik irratti.Innis Miniliik looltuu fi qawwee qabateeti na dhooksaa jedhee koolu galtummaa kan gaafate.Warra gidduu obboloota lamaanii(Tufaa Munaa fi Araddoo) deemani immoo Tufaa Munaatti akka Tufaa Araddoo Miniliikiif eeyyamee as dabarseetti itti himu.Tufaa Araddoottimmoo akka Tufaa Munaa dhaqee fideetti itti himu.Shakkii kanaan Osoo jiranii Tufaa Munaa Farda waraanaa akka Miniliikiif kenneetti Tufaa Araddootti himama.Kanaaf atimmoo Ilma Lee tokko naaf ergii ani maseena Mucaa hin qabu nan guddifadha jettee Xaayituu Buxul jaarsummaa ergatteetti Tufaa Araddootti.Innis arii Tufaa Munàa ilmasaa Abeebee Tufaatiin kenneef.
Abeebee Tufaas dhaqee kiristinnaa ka’ee maatiisaas kiristinnaa akka kaasiseerudha.
Akka Obbo Tadilaa Odaa Tufaa fi Obbo Zooduu Maammoo Abeebee Tufaa natti himanitti; Miniliik sodaa Tewoodiroos Gondorii dhufee na qabataa qabuun darbee gara Olonkomiitti dhokateera Xaayituu Gaara inxooxxoorratti dhiisee.Xaayituu lukni (miilli) ishee no dhiita’a ture.Kanaaf bishaan ho’aa hora Finfinneetti yoo dhiqatte akka fayyitu itti himamnaan Abeebee Tufaa gara Tufaa Araddootti jaarsummaa ergameera bishaan hora Finfinnee eeyyamsiisu.Silaa abbaan ilma didaaree? akka deemtee dhiqattu eeyyamameef.Hubaadhaa yeroi kanatti Miniliik Inxooxxoo hin jiru.Deddebitee yommuu dhiqattus miilli ishee fooyya’aa akka dhufedha.
Ergaa Xaayituu isa lammaffaa gara Tufaa Araddootti karaa ilmasaa Abeebee Tufaa;
“Miillikoollee baay’ee naaf fooyya’eera xabala baay’ee eebbifamaadha.garuu guyyaa guyyaan gara inxooxxoorraa gara hora Finfinneetti marmaarsi naaf gamee hangan fayyutti bakkuman bulu adaraa gadi siiqeen godoo buufaadha ” jettee eeyyama gaafatattee eeyyamameef.Gadi siiqxee mooraa amma Yuunivarsiitiin irra jirurratti godoo buufattee deddeebitee dhiqachaa ture.Gaaf tokko Miniliik Olonkomii bakka dhokatee three gara niitiisaa gaafa dhufu isheen bakka duraan qubachiifamaniiru dhiistee gadi buute isa eegde.”Xaayituun eessa deemtee jedhee gaafannaan kuunnoo goods kanatti galteetti jedhanii godooshee itti agariisan.Innis kunimmaa Addis Ababaadha jedhe.” kanarraan kan ka’e Maqaan Finfinnee jijjiirameedha.
Firummaa Tufaa Araddoo karaa ilmasaanii dabalaa baay’ee dabalaa dhufeen ammas bakkuma amma jiran kana akka turan jaarsummaa dhaqame.sababni Xaayituu asuma turuu barbaaddef gaafa Inxooxxoirratti Qorratu naaf game maaloo as naaf wayya xaballi keessanis na fayyiseera waan ta’eef nan turaadha.Tufaa Araddoos eeyyameeraaf.
Silas firoomanii hin gamnoomani mitiree? Xaayituun gaafa tokko Tufaa Araddoof Araqee ergitiif erga gaafa Araqee dhugee Tufaa Araddoo fayyaa dhabee akka du’edha.
Seenaan amma barreessaa jiru kana yeroo tokko TV OBS irratti hojjechuu jalqabeen ture.Namoonni seenaa kana natti himanitti.
1.Obbo Tadilaa Odaa Tufaa Araddooti.umrii isaanii waggaa 96tti barana du’aan boqotan.Ogeessa Seeraa turan bara H/sillaaseetii kaasee hanga Dargii keessas.yeroo ani isaanii arge iji isaanii hin argu.
2.Obbo Bazzaabiih Odaa Tufaa Araddooti .Isaanii immoo quxisuu Obbo Tadilaati.Ogeessa fayyaa yeroo dheeraaf hospitaala Phaawuloos hojjechaa turaniiru .Yeroo ammaa sooramarra jiru.
3.Obbo Zooduu Maammoo Abeebee Tufaa Araddooti.Isaanii ammayyuu hojjetaa mootummaati.
Kutaa 1ffaa asirratti xumureen……
Kutaa 2ffaan………..# Abeebee Tufaa eenyu?
# Lola Xaaliyaaanii isa jalqabaa akkamitti hoogganee?..
# Biyya Itiyoophiyaa jedhamtu kana ijaaruuf Oromoon maal hojjeteeti eenyu faarsamee?
#Du’a Goobanaa Daaccee fi
# Summii Abuune Takile Haayimaanootiin walitti deebina.
… ……….Horaa Bulaa……..
Madda: Mitiku Fekadu
Previous: “Rakkoo Guddaan Mirga Ofiif Gaafachuu Dhabuu Dha” Dr Nagaasoo Gidaadaa
Next: ኦጋዴንና የሀገር አንድነት ሥጋቶች